ပြင်သစ်နိုင်ငံ၌ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် “ကျား”ပုံပါ တံဆိပ်ခေါင်းများ ထုတ်ဝေ - Xinhua News Agency
ပါရီ ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ပြင်သစ်နိုင်ငံ စာပို့လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီသည် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်တွင်စတင်ကျရောက်မည့် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်(ကျားနှစ်) ကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် “ကျား”ပုံပါ တံဆိပ်ခေါင်းနှစ်မျိုးကို ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်တွင် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။အနီရောင်အောက်ခံပေါ်တွင် လဲလျောင်းနေသော ကျားတစ်ကောင်ပုံပါ တံဆိပ်ခေါင်းတစ်မျိုးကို ပြင်သစ်ပြည်တွင်း စာပို့လုပ်ငန်း၌ အသုံးပြုသွားရန် ဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးမှာ ယူရိုငွေ ၁.၁၆ ယူရို ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပါရီမြို့အခြေစိုက်တရုတ်အနုပညာရှင် Chen Jianghong က ကျားနှစ်ကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ၎င်းကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းဆွဲထုတ်ထားသည့် တံဆိပ်ခေါင်းများကို ပါရီမြို့၌ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်တွင် ပြသနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အခြားတံဆိပ်ခေါင်းပုံစံ တစ်မျိုးမှာ အပြာရောက်အောက်ခံပေါ်တွင် ခပ်ဝေးဝေးကို ငေးမောကြည့်နေသော ရပ်နေသည့် ကျားတစ်ကောင်ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပြီး ယင်းတံဆိပ်ခေါင်းကိုမူ နိုင်ငံရပ်ခြားစာပို့ဝန်ဆောင်မှုတွင်အသုံးပြုရန်ဖြစ်ကာ တန်ဖိုးမှာ ယူရိုငွေ ၁.၆၅ ယူရိုဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ တံဆိပ်ခေါင်းများကို တရုတ်အနုပညာရှင် Chen Jianghong က ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ပြီး ကျားနှစ်ခေါင်သည် ခွန်အား နှင့် မျှော်လင့်ချက်ကို အသီးသီး ကိုယ်စားပြုကြောင်းသိရသည်။
“ တရုတ်ပြည်မှာတော့ ကျားဟာ တောဘုရင်ပါပဲ ။ တရားမျှတမှု ၊ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှု နဲ့ ခွန်အားကြီးမှုတို့ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျားဟာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရာမှာ တရုတ်ပြည်သူတွေရဲ့ ကြီးမားတဲ့ကျိုးပမ်းအားထုတ်မှုရဲ့ သက်သေခံချက်ဖြစ်သလို လူသားနဲ့သဘာဝအကြား သဟဇာတဖြစ်စွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်းရဲ့ ပြယုဂ်လည်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု တံဆိပ်ခေါင်းထုတ်ဝေဖြန့်ချိခြင်းအခမ်းအနား၌ အမှာစကားပြောကြားစဉ် ပြင်သစ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး Lu Shaye က ဆိုသည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံ စာတိုက်လုပ်ငန်းဥက္ကဌ နှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Philippe Wahl က တစ်ဆယ့်နှစ်လ ရာသီခွင်သည် တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သလို လူသား နှင့် သဘာဝအကြား ဆက်ဆံရေးများတွင် တရုတ်ပြည်သူများ၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုလည်း ထင်ဟပ်စေကြောင်း ဆိုသည်။
ပြင်သစ်စာတိုက်လုပ်ငန်းအနေဖြင့် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာကပင် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ရာသီခွင်လိုက် အထူးတံဆိပ်ခေါင်းများကို ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခဲ့ပြီး ယင်းမှာ ပြင်သစ်ပြည်သူများအတွက် တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုကို ပိုမိုသိရှိနားလည်နိုင်စေရန် ကူညီပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wahl က ဆိုသည်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်ကတည်းက ပြင်သစ်စာတိုက်လုပ်ငန်းသည် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအတွက် ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ရာသီခွင်တိရစ္ဆာန်အကောင်လေးများ၏ ရုပ်ပုံပါ တံဆိပ်ခေါင်းများကို နှစ်အလိုက်ထုတ်ဝေခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်လူမျိုးတို့၏ ရာသီခွင်တွင် ကြွက် ၊ နွား ၊ ကျား ၊ ယုန် ၊ နဂါး ၊ မြွေ ၊ မြင်း ၊ သိုး ၊ မျောက် ၊ ကြက် ၊ ခွေး နှင့် ဝက်တို့ အပါအဝင် တိရစ္ဆာန် အကောင်လေး ၁၂ မျိုးကို နှစ်အလိုက်ကိုယ်စားပြုထားရာ တရုတ်လူမျိုးတို့၏ ရိုးရာ ဓလေ့ထုံးတမ်းများကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
France issues stamps to celebrate Chinese Lunnar New Year
PARIS, Jan. 22 (Xinhua) — French postal service company La Poste on Saturday issued two stamps to celebrate the upcoming Chinese Lunar New Year of Tiger, which starts on Feb. 1.
“Tiger is seen as the ‘King of the beasts’ in China. It represents justice, majesty and strength. Tiger also bears witness to the extraordinary efforts of the Chinese people in the protection of biodiversity and the harmonious coexistence of man and nature,” Chinese ambassador to France Lu Shaye said at the issuing ceremony.
For his part, Philippe Wahl, president and chief executive officer of La Poste, said that the zodiac isakey part of Chinese culture, reflecting Chinese people’s thinking on the relations between man and nature.
Since 2005, the French post office has been celebrating the Chinese Lunar New Year each year by issuing stamps featuring the year’s zodiac animal.
The Chinese Zodiac is represented by 12 animals to record the years and reflect people’s attributes, including the rat, ox, tiger, rabbit, dragon, snake, horse, sheep, monkey, rooster, dog and pig.
Photos (1/2) Paris-based Chinese artist Chen Jianghong displays the Year of Tiger commemorative stamps designed by him during an issuing ceremony in Paris, France, Jan. 22, 2022. (Xinhua/Gao Jing)
Photo (3) Chinese Ambassador to France Lu Shaye (L), Chief Executive Officer of La Poste Philippe Wahl (C) and Paris-based Chinese artist Chen Jianghong (R) pose foraphoto during an issuing ceremony for the Year of Tiger commemorative stamps in Paris, France, Jan. 22, 2022. (Xinhua/Gao Jing)